Coronavirus IgG & IgM Ulo ulo ogwu Cassette na ndi n’enye ha | New Asia Pacific
Cont Ndị ngwugwu okwu】
· Pouch ọdịnaya: kaseti udomo oro, Ekemede.
· Nnukwu mkpuchi 100 (20 )l) maka nnwale 100.
· 12 ml ihe atụ ntule maka 100 nnwale.
· Ntụziaka nnwale.
25pouches / igbe, igbe ọgbụgba 15 * 14 * 6.5cm,ịdị arọ nke igbe ahụ bụ 150g.
100boxes / katọn, akụkụ katọn 72 * 62 * 36cm,22KGS.
Show Ngosipụta Ngwaahịa】
Use Ijizu Ego】
Ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Nnwale bụ ngwa immunochromatographic ngwa ngwa, ruru eru ma dịkwa mma. in vitro kwụọ ụgwọ maka nchọpụta ọdịiche dị na nje IgM & IgG na nje COVID-19 n'ọbara mmadụ, plasma ma ọ bụ ihe nlele ọbara niile enwetara n'aka onye ọrịa butere ọrịa COVID-19. Emebere ngwaọrụ a iji nyere aka na mkpebi siri ike nke ekpughere nje COVID-19 na nso nso a ma ọ bụ na-esochi ọnọdụ ọrịa ahụ mgbe oria COVID-19 bu oria.
Aykwụ ụgwọ a na-enye nsonaazụ mbido. Ezi nsonaazụ apụtaghị na ọ bụ ọrịa ugbu a, kama ọ na-anọchi anya ọkwa dị iche iche nke ọrịa ahụ mgbe ọ butere ọrịa. IgM ziri ezi ma ọ bụ IgM / IgG abụọ dị mma na-egosi ikpughe ndondo emi, ebe IgG ziri ezi na-atụ aro ọrịa bu ụzọ, ma ọ bụ ọrịa latent.
Ekwesịrị igosipụta ọrịa ọrịa ugbu a site na Real-Time Reverse Transcriptase (RT- PCR) ma ọ bụ usoro usoro usoro malitere ịrịa. Emere nnwale a maka iji ọkachamara eme ihe.
【Ofkpụrụ nke Assay】
Ofkpụrụ Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Nnwale bụ nnwale nnweta immunochromatographic maka nchọpụta oge na nchọpụta ọdịiche dị na nje IgM & IgG na nje COVID-19 na ọbara mmadụ, plasma, ma ọ bụ ihe nlele ọbara. Nje covid-19-
a na-enye ọgwụ mgbochi ụfọdụ kpọmkwem na ọla edo a na-akpọ colloidal ma debe ya na paụnd conjugate. Monoclonal anti Igio mmadu na IgG monoclonal anti-mmadu bu ihe aghapuru na uzo nyocha mmadu abuo (T2 na T1) nke nitrocellulose membrane. Igini IgM (T2) diri nso nlele ya nke oma ma uzo IgG (T1) sochiri. Mgbe agbakwunyere ihe nlele ahụ, a na-agwugharị ọla edo-antigen conjugate yana ọgwụ COVID-19 IgM na / ma ọ bụ IgG, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị na nlele ahụ, ga-emekọrịta ihe antigen conjugated ọlaedo. Immunocomplex ahụ ga-akwaga na windo nnwale ahụ ruo mpaghara nnwale (T1 & T2) ebe IgM (T2) na IgG (T1) ga-ejide gị, na-etolite ahịrị pink na-ahụ anya, na-egosi nsonaazụ oma. Oburu na ihe ogwu COVID-19 adighi adi na
Ihe nlere, enweghi eriri pink ga-egosi na ahịrị ule (T1 & T2), na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma.
Iji rụọ ọrụ dị ka usoro nchịkwa n'ime, akara akara kwesịrị ịpụta mgbe niile na Njikwa Mpaghara (C) mgbe emechara ule ahụ. Ọnụnọ nke akara njikwa pink na mpaghara Njikwa bụ ihe ngosipụta nke nsonaazụ na-adịghị mma.
Ced Usoro nyocha】
Wepu ngwaọrụ anwale na pouchị mechiri emechi site na ịpị na
notch ma debe ngwaọrụ nnwale ahụ na mbara ala, ala akọrọ.
Maka mkpịsị ọbara niile:
Site na iji ọkpọ a na - adọta, were mkpokọta ọbara dum ruo nhịhịa ojii.
Maka ọbara n'ogwe:
I jiri pipette ma obu okpu mkpuchi, were mkpocha obara (20µl).
Maka serum / plasma:
Site na iji pipette, kpoo serum / plasma (10µl).
Tinye ọbara / plasma / ọbara dum anakọtara n'ogwe dị elu (dị nso na windo nnwale) nke ịlele nke ọma na ngwaọrụ nnwale na-enweghị afụ ikuku (jide eriri ọkpọ / pipette n'ụzọ kwụ ọtọ) ma jiri nwayọ na-emetụ ngwụcha ahụ n'akụkụ paụlị ahụ n'omume ọma maka ịnyefe. ).
Chere maka oge 20-30; tinye 2 tụlee (ihe dị ka 90µl) nke ihe ntinye ihe nlele ahụ nke ọma na ngwaọrụ nyocha.
Gụpụta nsonaazụ mgbe nkeji 15-20 gachara. Ntụle siri ike siri ike nwere ike rụpụta ezigbo ihe ruru obere ka otu nkeji.
Emela ngwa ngwa ihe dị ka nkeji iri atọ.
Uwe ojii acha ọbara ọbara na-egosi naanị na mpaghara nchịkwa (C), na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma maka ọrịa COVID-19.
Udiri agba na-acha odo odo na-apụta na mpaghara nchịkwa (C) na mpaghara T1 na / ma ọ bụ T2.
1) IgM na IgG dị mma, ndị otu a na-ahụ anya na T2 na T1, na-egosi nsonaazụ dị mma maka ọrịa COVID-19 enwere ike.
2) IgM ziri ezi, igwe na-ahụ anya na mpaghara T2, na-egosi nsonaazụ dị mma maka ọrịa COVID-19 nwere ike.
3) IgG ziri ezi, ìgwè na-ahụ anya na mpaghara T1, na-egosi nsonaazụ dị mma maka ọrịa COVID-19 nwere ike.
Enweghị otu egwu a na-ahụ anya na mpaghara nchịkwa (C). Tinyegharịa ngwaọrụ nnwale ọhụrụ. Ọ bụrụ na ule ka na-ada, biko kpọtụrụ onye na-ekesa ya na otutu nọmba.
【Ebe a na-eme ihe ngosi】
Nke gara aga: Apron disposable
Osote: Ọta ihu
Nyocha Ncov Novel Coronavirus 2019
Nnwale Nlele Ọkpụkpụ 2019 Novel Coronavirus
Ngwunye Ọrịa Ncov nke 2019
Nyocha Coconavirus nke 2019-Ncov Igg / Igm
Coronavirus Nyocha 2019-Ncov Rapid
Ngwongwo Nyocha nke Ncov 2019
Ngwongwo Nyocha 2019-Ncov
Kit Kit Igwe Igwe Igwe / Igg
Anka Cassette nyocha Anụmanụ
Kit Kit ule Ọgwụ
Anka nyocha C antiette Antibody
Kit na-anwale Antibody
Kitiniti Igwe Igwe Igwe Ig Ig / Igg
Cateette nwale China
Kit na-enyocha China Antibody
Kit na-anwale China Antibody
China Colloidal Gold Cassette
Kit Colinidal Gold Test Kit
Criette ule China Coronavirus
Ngwa nnwale ngwa ngwa Coronavirus nke China
China Coronavirus Nnwale Ọsọ ọsọ
Ngwa nyocha ngwa ngwa Coronavirus nke China
China Coronavirus Onyinye Anyi
Kit Coronavirus nke China
Mpempe nyocha nke onwe Coronavirus nke China
China Coronavirus Nnyocha nyocha onwe
Ngwa nyocha Coronavirus nke China
Kitin Coronavirus nke China
Criette nyocha China Coronavirus
Kitinyocha Coronavirus nke China
Kit na-enyocha China Covid
China Cvidette ule Cassette
Cassette China Diagnostic
Kit Ngwa nyocha China
Cassette nyocha nke China
Kit nwale China
Cateette nyocha China
Ngwa nnwale nke nyocha China
Cateette China Igm / Igg
Kitin Igm / Igg China
Cassette nyocha Ahụike China
Kitị Ahụike Ahụike China
Kit na nnwale nyocha ahụike China
Ngwa nnwale nke nyocha ahụike China
Kit Ngwa ngwa ngwa Raag Re China
Ngwa ngwa ngwa Raag Re China na China
China ngwa ngwa ule Cassette
Kit ngwa ule ngwa ngwa China
China ngwa nyocha Nnwale
Kit Ngwa ngwa ngwa China
Cassette China Rapid Virus
Kit Ngwa Nyocha Ọrịa Ọrịa China
China Reagent Cassette ule
Kiti Reagent China
Ngwa ule Reagent China
Cassette nwale China Reagent
Ngwa nnwale China Reagent
Cassette Ule China
Colloidal Gold Cassette
Kitloidal Gold Test Kit
Colloidal Gold ule Cassette
Ngwa nnwale Colloidal Gold
Nnwale Coronavirus 2019 Ag Rapid
Nyocha Coronavirus Ag
Ngwa nnwale Coronavirus Ag Rapid
Nnwale Coronavirus Ag
Nnwale Coronavirus Antibody
Nnwale Ọsọ nke Coronavirus
Kitre Coronavirus Antigen
Nnwale Nchọpụta Coronavirus
Nnwale Ngwaọrụ Coronavirus
Ngwa nnwale Coronavirus ngwa ngwa
Ngwa ngwugwu Coronavirus mmadụ
Kitro Coronavirus mmadụ
Coronavirus Igg Igm Igwe Nyocha
Ule nyocha Coronavirus Igg / Igm
Nnwale Coronavirus Igg / Igm
Nnwale Ọsọ ọsọ Coronavirus
Ngwa nnwale Coronavirus Rapid
Cosenavirus Rapid Nwalere kaseti
Ngwa nnwale Coronavirus
Coronavirus Onyocha Cassette
Kit Nyocha Coronavirus
Kaadị nyocha nke Coronavirus
Cosenavirus Onyocha Cassette
Icho nnwale Coronavirus
Nnwale nnwale Coronavirus
Ngwa nnwale Coronavirus Maka ụmụ mmadụ
Kaadị ule Coronavirus
Nchọpụta nyocha Coronavirus
Ngwọta Ule Coronavirus
Ihe nlere Covid Test Cassette
Ngwongwo nnwale Covid
Nnwale nyocha Covid
Ngwunye Ule Covid
Kit Kit ule 19
Coass-19 Cassette Ule
Cassettes Nnwale Co-19
Kit Kit-19 Kit
Igwe nnwale Covid-19
Cassette Nnwale Diagnostic
Kit Nyocha Diagnostic
Ngwa nnwale nke nyocha
Nyocha Nnyocha Ọrịa
Nnwale mmadụ Coronavirus
Igwe nnwale Igm & Igg
Ngwunye Igm & Igg
Igwe nyocha Igm / Igg
Kitm Igm / Igg
Cassette Diagnostic Medical
Kitị Diagnostic Medical
Cassette Nnyocha Ọgwụ
Ngwa nnwale nyocha ahụike
Cassette Nnwale Nyocha Ahụike
Ngwa nnwale nyocha ngwa-ngwa
Mpempe ule Anwale Ọsọ
Ngwa nnwale nke ọsọ ọsọ
Ngwa ngwa ngwa Reagent Reagent
Cassette Nnwale Ọsọ
Ọnụ ego ngwa ngwa ngwa nnwale
Ngwa nnwale ngwa ngwa
Cassette Anwale ngwa ngwa
Ngwa nnwale nke Nje Virus
Reaent Test Cassette
Kitu Reagent Kit
Igwe nnwale Reagent
Ngwongwo Nnwale Reagent
Ngwa nnwale Reagent
Mmiri Proof Hdpe Apron, Gowns chebe ya, Uwe Nchedo, Mmiri Proof, Dust-Proof Pet Face Shield, Uwe ọgwụ A na-atụfu,